शहीद मङ्गलसिंह राजपुतको चौथो पुण्यतीथिः स्व. राजपुतको सपना पूरा हुने मोर्चाको दावी – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsशहीद मङ्गलसिंह राजपुतको चौथो पुण्यतीथिः स्व. राजपुतको सपना पूरा हुने मोर्चाको दावी
शहीद मङ्गलसिंह राजपुतको चौथो पुण्यतीथिः स्व. राजपुतको सपना पूरा हुने मोर्चाको दावी
August 3, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङः यूपीए सरकारले तेलङ्गानाको मुद्दालाई हरियो सङ्केत दिइसकेको थियो। तेलङ्गाना 29 औँ राज्य हुने निश्चित थियो। त्यसबेला जीटीएमा अल्मलिरहेको दार्जीलिङ पहाडमा फेरि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागले तीब्रता पाएको थियो। तेलङ्गानासितै गोर्खाल्याण्ड राज्य पनि गठन हुनुपर्छ भनेर 2013 मा पनि पहाड आन्दोलित थियो। त्यसबेला पहाड अनिश्तकालीन बन्द थियो, जुलूस धरणा भइरहेकै थियो। ठिक त्यसबेला मङ्गसिंह राजपुतले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर कालेबुङ डम्बरचोकमा आत्मदाह गरेका थिए।3अगस्त 2013 का दिन उनको मृत्यु भएको थियो।
अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा आत्मादाह गर्ने यी नै मङ्गलसिंह राजपुत आज पुनः सम्झिए। स्व. राजपुतको चौथो पुण्यतीथि यहाँको होम्समा अवस्थित उनको शहीद वेदीमा खदा-माला अर्पण गरेर पालन गरियो। गोर्खाल्याण्डका निम्ति आत्मादाह गर्ने प्रथम शहीदका रूपमा आज गोजमुमो नेतृत्व एवं कार्यकर्ताहरूले शहीदवेदीस्थलमा स्व. राजपुतलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।
यसरी नै आज दैनिक रूपमा चलिरहेको जिल्लापाल कार्यालय धरणा कार्यक्रमअवधि पनि स्व. राजपुतको तस्वीरअघि खदा-माला अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यस अवसरमा स्व. राजपुतकी पत्नी मञ्जु राजपुत पनि उपस्थित थिइन्। धरणा कार्यक्रमवअधि नारी मोर्चा नेतृ तारा लोहारले मङ्गसिंह राजपुतको योगदानको चर्चा गर्दै राजपुतले देखेको गोर्खाल्याण्डको सपना पूर्ण हुने दावी गरिन्। राजपुतले गोर्खाल्याण्डकै निम्ति प्राणको आहुती दिएको भन्दै उनले गोर्खाल्याण्ड राज्य अवश्य गठन हुने बताइन्।
अर्कोतिर धरणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक कमल भट्टराईले केन्द्रमा गोर्खाल्याण्डको विकल्पमा खिचडी पाकिरहेको कुरा झुटो रहेको बताउँदै भने, केन्द्रमा गोर्खाल्याण्डबाहेक कुनै विकल्पको कुरा भएको छैन। आन्दोलनकारी अनि सरकार दुवै पक्षले नै गोर्खाल्याण्डको विकल्पको कुरा गरेका छैनन्। उनले जनतालाई भ्रममा पर्नु नहुने आह्वान गरे। यस क्रममा उनले बङ्गाल सरकारको आलोचना गर्दै आन्दोलनकारीहरूले दलीय झण्डाको सट्टा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अझ राष्ट्रियताको सन्देश दिनुपर्ने पनि आह्वान गरे। यसरी नै क्रामाकपाका विक्रम छेत्रीले बङ्गालमा जुनै सरकार आए पनि गोर्खाप्रतिको नियत नकारात्मक नै रहने गरेको भन्दै गोर्खाल्याण्डका निम्ति एकबद्ध बन्ने आह्वान गरे।
मोर्चाको पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार आज मुष्ठीदान सङ्ग्रह गरी जिल्लापालई सुम्पियो। एकातिर मुख्यमन्त्रीले पहाडमा खाद्यन्नको अभाव रहेको कुरा गरिरहेको अनि अर्कोतिर खाद्यन्नमा नाकाबन्दी भइरहेको विरोधस्वरूप मुष्ठीदान सङ्ग्रह गरी जिल्लापाललाई सुम्पिएको हो। आज बन्दको 50 औँ दिन पूर्ण भएको छ भने आमरण अनशनले पनि 14 दिन पूरा गरिसकेको छ।